AC Milan Oo Saxeexa Xiddig Qayb Ka Ah Barcelona Si Weyn Ugula Dagaalamaysa Arsenal & Sababata Rosaneri Ay Gunners Ugu Garaaci Karaan Tartankan. - Wargane News
Home Sports AC Milan Oo Saxeexa Xiddig Qayb Ka Ah Barcelona Si Weyn Ugula...
Kooxda AC Milan ayaa weerar ku ah dhigeeda Barcelona kaddib markii ay diiradeedu qabatay xiddiga khadka dhexe ee kooxdaas ee Denis Saurez kaas oo sidoo kale ay dhinaceeda ka doonayso Arsenal.
Sababta dhalin karta in kooxda tababare Gennaro Gattuso ay ku guuleysato saxeexa Suarez ayaa ah baahida ay u qabto xiddig khad dhexe ah kaddib dhaawacyada soo gaadhay xiddigaheeda Lucas Biglia iyo Giacomo Bonaventura.
Dhinaca kale, Arsenal ayaa qudheedu baahi u qabta xiddig khad dhexe ah kaddib wararka xanta ah ee sida joogtada ah u sheegaya in Aaron Ramsey uu kooxda iskaga bixi doono suuqa xagaaga dambe.
Heshiiska Aaron ayaa ah mid ku eeg dhammaadka xilli ciyaareedkan waxaana gabi ahaanba istaagay wadahadaladii heshiis kordhinta ee u dhaxeeyay isaga iyo maamulka Gunners waana sabab werwer galin karta kooxda ree London.
Milan iyo Arsenal ayaa xiddigan kursiga keydka ee Blaugrana lagu ilaaway ugu horreynba ku qaadan kara qaab amaah ah oo ay heshiiska ku darayaan qoddob u ogolaanaya inay si rasmi ah ula saxeexan karaan.
Ugu dambayn, Kooxaha Emery iyo Gattuso ayaa la kala ogaan doonaa midka saxeexa Denis ku guuleysata iyadoo tartanka inta ugu badani ku xidhnaan doono baahiyaha ay qabaan labada dhinac.